Ny 'Lalao Squid' Prank dia manery an'i Netflix hanao fanovana vitsivitsy - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny 'Lalao Squid' Prank dia manery an'i Netflix hanao fanovana vitsivitsy
by Anthony Pernicka Oktobra 7, 2021
by Anthony Pernicka Oktobra 7, 2021 37,718 hevitra
Lalao Squid dia tranga fialamboly izay mandray an-tanana. Ny andian-dahatsoratra Netflix Thriller dia nahatratra ny laharana # 1 tamin'ny sehatra streaming ao amin'ny firenena 90 manerana an'izao tontolo izao. Tsy dia ratsy loatra ho an'ny andian-tantara izay tsy nisy te hanao azy tamin'ny voalohany. Notsongaina aza i Netflix nilaza fa ny Squid Game dia mety ho ny "fampisehoana lehibe indrindra hatrizay."
Miezaka ny hiantso lalao squid ireo mpankafy
Hay, ny nomeraon-telefaona ampiasaina ao amin'ilay andian-dahatsoratra dia isa mavitrika tokoa. Tsy hahatratra ny ekipa fidiran'ny lalao ianao. Ny nomeraon-telefaona dia an'ny vehivavy Koreana Tatsimo izay tototry ny antso sy ny hafatra an'arivony maro hatramin'ny nanombohan'ny andiany.
Kim Gil-young dia mitantana fivarotana tsindrin-tsakafo any amin'ny fanjakan'ny Seongju ary efa 16 taona no nampiasana an'io isa io, hoy izy tamin'ny CNN Alakamisy.
Rehefa navoaka voalohany ilay tantara an-tsarimihetsika Koreana Tatsimo malaza "Squid Game" dia nilaza i Kim fa mandray antso an'arivony isan'andro izy. Tao anatin'izay andro vitsy lasa izay dia nahazo antso sy hafatra an-jatony izy, hoy izy. - CNN.com
CNN dia nitatitra ihany koa fa eo am-panafody fanafody ilay vehivavy mba hampitony ny fitaintainany taorian'ny fihenjanana rehetra naterak'ireo antso an-tariby ireo taminy. "Tsy afaka mifantoka aho satria miantso ahy matetika ny isa tsy fantatra," hoy izy tamin'ny CNN. Tombantombana madio avy amiko, saingy tsy ho gaga aho raha miteraka fandaminana karazana izany. Indrindra satria i Kim-Gil-young dia milaza fa mampiasa io isa io amin'ny fivarotana tsindrin-tsakafo izy ary voakasik'izany ny orinasa.
Netflix dia nanala ireo seho tamin'ny andiany izay mampiseho ny nomeraon-telefaona. "Miaraka amin'ny orinasam-pamokarana, izahay dia miasa mba hamahana ity raharaha ity, ao anatin'izany ny fanovana ny seho misy laharana telefaona ilaina," hoy ny orinasa tamin'ny fanambarana nataony tamin'ny CNN Alakamisy.